Tantara: Niherika ny Vadin’i Lota - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
NIARA-NONINA tamin’i Abrahama tao amin’ny tany Kanana i Lota sy ny ﬁanakaviany. Indray andro dia hoy i Abrahama tamin’i Lota: ‘Tsy ampy ny tany eto ho an’ny bibintsika rehetra. Raha sitrakao, aoka hisaraka isika. Raha mandeha arỳ ianao, izaho kosa handeha atỳ.’
Dia nitazana ny tany rehetra i Lota. Nahita faritra iray tena tsara izy, dia tany nisy rano sy ahi-maitso betsaka ho an’ny bibiny. Ny distrikan’i Jordana izany. Naﬁndran’i Lota tany àry ny ﬁanakaviany sy ny bibiny. Farany dia nanorim-ponenana tao amin’ny tanànan’i Sodoma izy ireo.
Hoy ireo anjely tamin’i Lota: ‘Faingàna! Ento ny vadinao sy ny zanakao roa vavy ary mialà eto!’ Somary tsy rototra i Lota sy ny ﬁanakaviany teo am-pandehanana ka dia notantanan’ireo anjely ary notarihiny hivoaka ny tanàna. Dia hoy ny anankiray tamin’ireo anjely: ‘Mandosira hamonjy ny ainareo! Aza miherika. Mandosira any an-tendrombohitra, fandrao haringana ianareo.’
Afaka maka ﬁanarana tsara avy amin’izany isika. Mampiseho amintsika izany fa mamonjy an’ireo izay mankatò azy Andriamanitra, fa ireo izay tsy mankatò azy kosa dia hamoy ny ainy.
Nahoana i Lota no niﬁdy ny hipetraka tany Sodoma?
Ahoana no azontsika anahafana an’i Abrahama, rehefa mandamina tsy ﬁfanarahana? (Gen. 13:8, 9; Rom. 12:10; Fil. 2:3, 4)
Ahoana no ﬁheveran’Andriamanitra ny ﬁraisan’ny samy lehilahy na ny samy vehivavy, araka ny hita amin’io tantara ara-baiboly io? (Gen. 19:5, 13; Lev. 20:13)
Inona no tsy nampitovy ny ﬁhetsik’i Lota sy Abrahama, rehefa nomen’Andriamanitra toromarika izy ireo? Ary inona no ianarantsika avy amin’izany? (Gen. 19:15, 16, 19, 20; 22:3)
Ahoana no ﬁheveran’ny vadin’i Lota ny harena, ary mampitandrina antsika mba tsy hanao inona izany? (Lioka 12:15; 17:31, 32; Matio 6:19-21, 25)